အထက (၂) ဗိုလ္တေထာင္
ဦးဖိုးလတ်(BA., M.A., BCS) ၁၉၂၀-၁၉၂၁ ပထမဦးဆုံးသောကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် ကျောင်းသားသပိတ်ကောင်စီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ဦးဘလွင် (B.A (Honours)., F.R.G.S (Fellows of the Royal Geographical Society) (England)) ၁၉၂၄-၁၉၂၅
ဒေါက်တာသိန်းမောင် (BA., M.M.F., M.L.C) ၁၉၂၅-၁၉၃၂ ဆရာဝန်၊ ပထမဆုံးသော ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး၊
ဦးဧသွယ် (B.A) ၁၉၅၃-၁၉၅၇ ၁၉၂၀ မှသည် ၁၉၅၅ ခုနှစ်အထိ မြို့မကျောင်းတွင် သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ဒုတိယကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး (နောင်အခါ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး) ဖြစ်ပြီး ဝဏ္ဏကျော်ထင် ဦးဧသွယ်အဖြစ်ထင်ရှားသည်။ (၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် ကျောင်းသားသပိတ်)
ဦးဘတင် (B.A) ၁၉၅၇-၁၉၆၈ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် ကျောင်းသားသပိတ်
ဦးဘစော (BA., BEd) ၁၉၆၈-၁၉၇၀ -
ဦးလှသိန်း (BA., BEd.) ၁၉၇၀-၁၉၇၂ -
ဦးငြိမ်းမောင် (BA., BEd.) ၁၉၇၂ - ၁၉၈၂ -
ဦးဝင်းစိုး (BA., BEd.) ၁၉၈၂ - ၁၉၈၄ -
ဦးတင်ဝင်း (BA., BEd.) ၁၉၈၄ - ၁၉၈၈ -
ဦးခင်မောင်ညွန့် (BA., Ed. BEd.) ၁၉၈၈ - ၁၉၉၀ -
ဦးသာဝင်း (BEd.) ၁၉၉၈- ၁၉၉၉ -
ဦးတင်လှိုင် (BEd.) ၁၉၉၉- ၂၀၀၂ -
ဦးတင်မောင်ထွန်း (BSc. Dip .Ed.) ၂၀၀၂-၂၀၁၁ -
ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ အနုပညာရှင်များပြင်ဆင်
၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။